Hoos u dhaca si aad u heshid dhalinyarada IITians Iimaan IIM Minds: Sundar Pichai - ITS
Qalafsan si aad u hesho dhalinyaro IITians leh IIM Minds: Sundar Pichai
Kharagpur: Wuxuu qiray in uu isticmaali jiray fasalo ay ku jiraan maalmaha dhismaha ee IIT Kharagpur, madaxa shirkada Google Sundar Pichai Khamiistii ayaa la sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helo dhalinyarada IITians macnaheedu yahay in ay galaan IIMs xitaa sida uu uga walwalsan yahay muhiimada helitaanka khibrad dhab ah.
"Waxaa jira miisaan aad u weyn oo ku saabsan mabaadii'da oo dhan oo la marayo xirfadkiina (Hindiya). Markaad ku jirto dugsiga sare waxaad tixgelineysaa iskuulka. Anigu waxaan aad u naxay in shakhsiyaadka ay galaan IITs isla markiiba waxay u maleynayaan inay IIMs iwm. Waa arrin aad muhiim u ah in la helo khibrad shahaadooyin ah, "ayuu yiri Pichai oo ka hadlay kulan aan caadi aheyn oo ay la leeyihiin IITians halkan maanta.
Dib ugu noqoshada sanadka 23 ee ka dib markii uu dhamaaday B. Tech in 1993, wuxuu sheegay in fahamku uu maalgashado tamar badan oo buugaag ah isla markaana la qabsan karo aqoon yahan.
On nostalgic soo baxay si ay u xasuusato maalmaha asaasiga ah, wuxuu u tegey qolka hostel, la kulmeen barayaasha iyo xiriir la fahmida.
"Sida iska cad," ayuu ahaa jawaabtiisa markii la waydiiyay bal inuu fasalo qabey.
"Waxaan ku sii jirnay wakhti dambe habeeynkii habeenkii iyo fasaxyada subaxdii ka maqnaa," ayuu dib u eegay.
Pichai waxa uu sheegay in uu ku foogan yahay dhageysiga ah in qaar ka mid ah macallimiinta heerka fasalka siddeedaad ay bilaabeen inay isu diyaariyaan IITs.
"Waqtigeyga, shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ayaa sheegay in shaqsigan uusan helin iskuulkan, waana jihada dariiqa isaga," ayuu dib u eegay.
Wuxuu wax ka bartey fahamkiisa ku saabsan booskiisa qalin-jebinta si uu u tijaabiyo waxyaabo kala duwan, ka soo baxa maqaarka, u dheellitiraan oo qaado jacaylka.
Hindiya, oo ah sidatan, waxa uu yidhi, wuxuu haystaa meel adag oo wax lagu baro sida waalidiinta si joogto ah uga wada hadla.
Ameerika, Pichai waxa uu yidhi, Stanford, tusaale ahaan, fahamku waxa uu ku soo baxaa oo kaliya marka ay joogaan sannadkii hore.
Markii uu soo dhamaaday BTT ee maaddada dhuxusha iyo qalabka dhismaha ee IIT, Pichai wuxuu ku sameeyey MS ee injineernimada iyo qalabka Sayniska ee Jaamacadda Stanford iyo MBA oo ka timid Dugsiga Wharton wuxuuna ku biiray Google 2004.
Waxay ahayd xilligan iyada oo sababtay in uu si lama filaan ah ula qabsaday Anjali oo iskuulkiisa iskuulka ka dibna u geeriyooday.
Waxa uu dib u eegay sida uu u jecel yahay gabdhaha gabdhaha ee gabdhaha ah si ay ula kulmaan iyada oo ay hoos u dhacday markii uu qof si qumman u qaylinayay, isagoo yiri "Anjali Sundar ayaa ku soo wacaya".
Ka dib markii uu ku gubay afar sano oo aan caadi aheyn, wuxuu yidhi, wuxuu dareemay murugo marka la rabay in la joojiyo.
"Waa wax aan la aqbali karin in sanadihii 23 ku soo laabto xaqiiqda," ayuu yiri Pichai.